Yechokwadi Chokoreti Lava Keke - Sugar Geek Show - Cake
Chokoreti Lava Cake Recipe
Izvi yakanyungudutswa chokoreti rava keke iri keke kunze, iine risingadzivisike, ooey-gooey yakanyungudutswa chokoreti nzvimbo. Iwe unongoda chete zvishandiso zvishoma uye dhizeti ino yeanoda chokoreti inouya pamwechete mumaminetsi makumi maviri nemashanu chete. Hapana musanganisi anodikanwa!
KABHUKU RERUVHA RAKAKWANA HERE KUDYA?
Lava keke haingori keke risina kubikwa. Iko kusarudzika kwakasarudzika kwechinyakare chokoreti keke uye soufflé. Kunyangwe iyo nzvimbo iri mvura, iyo tembiricha yemukati ichiri kusvika 160ºF saka zvakachengeteka kudya. Funga nezvazvo secustard kana ndimu curd. Mvura yacho inobikwa zvakaringana kuti igoita gobvu uye inotapira asi kwete zvakanyanya zvekuti inozoita mazai anopwanyika.
Vamwe vanhu vanosarudza kubika keke zvizere vobva vaisa imwe chokoreti ganache kana yabikwa. Kunyangwe izvi zvisiri chaizvo 'zvisirizvo' hachisi chokwadi chevava keke. Iko kuravira uye iko kweye yakatsetseka uye yakasviba custard mune yakanyatsojeka uye ine mhepo yekunze goko ndeye mashiripiti zvechokwadi!
Kana iwe usina nguva yekugadzira cheesecake kana kuzara kufa nekokoreti keke , iyi yakanaka inokurumidza 'fancy' dhizeti sarudzo.
CHOCOLATE LAVA CAKE ZVINOGONESESA
CHII CHOCOLATE CHINONYANYA KUSHANDISA?
Iwe haugone kunge uine chokoreti lava keke isina chokoreti! Ndiri kushandisa block yeCallebaut Belgian yakasviba chokoreti. Uchishandisa mhando yakanaka, 70% yakasviba chokoreti ichaita musiyano mukuru mukuravira. Iwe hausi kunyatsoda kushandisa chokoreti yemukaka kana chipa yakachipa yechokoreti senge amamondi bark kana switi inonyungudika. Callebaut, Ghirardelli chokoreti machipisi, Valrhona, kana Guittard zvese zvigadzirwa zvinoshamisa asi iwe unogona zvakare kushandisa yako yaunofarira bhawa yetirokoreti yakasviba kubva kuchitoro.
Kana iwe ukaitika kuti unogara padhuze neWINCO unogona kuwana Callebaut Belgian yakasviba chokoreti mubhawa fomu muchikamu chikuru kune yakachipa yakachipa!
CHOCOLATE LAVA CAKE Nhanho-ne-nhanho
Iyi yekubheka yakaringana ina, 6oz makanda echikanda kana maviri, 8oz - 10oz machira.
Nhanho 1 -Preheat oven yako kusvika 425ºF (218ºC) uuye nemazai ako kutembiricha yemukati.
Duncan hines chena keke sanganisa zvigadzirwa
Pro-tip - ini ndinoisa mazai angu mundiro yemvura inodziya kwemaminitsi mashanu kuti ndiuye nawo kutembiricha yemukati.
Nhanho 2 - Gadzirira machira ako eceramic nekukwiza zvidzitiro nemativi nebhotoro. Izvi zvinodzivirira iyo keke yebira kubva kunamatira kune ramekin.
Nhanho 3 - Kana iwe uri kushandisa chokoreti machipisi ruka danho iri. Chop bar yako chokoreti muzvidimbu zvidiki, izvi zvinoita kuti zvive nyore kunyungudika.
Nhanho 4 - Gadzira bain-marie nekuunza 2 inches yemvura kune simmer muhari. Deredza kupisa kusvika pasi uye wedzera girazi ndiro pamusoro. Ita shuwa kuti mbiya haisi kubata mvura. Wedzera chokoreti yako yakatemwa uye bota, fambisa kusvikira yangonyungudika, wozobvisa kubva pamoto. Isai musanganiswa padivi kuti utonhorere kusvikira kwati dziyei kana tembiricha yemukati, asi kwete kupisa.
Kana iwe unogona kusungunusa bhotela yako uye chokoreti mu microwave mu15-yechipiri zvikamu, zvichikurudzira pakati peumwe neumwe kusvikira bota uye chokoreti zvakatsetseka.
Pro-tip - Kana iwe uchinyungudutsa chokoreti yako mu microwave, ita shuwa yekuveura kana kuicheka zvakanaka. Nenzira iyoyo inonyungudika zvakaenzana uye inenge isinganyanye kupisa.
Nhanho 5 - Muhombodo hombe, whisk pamwe shuga, mazai, mazai emazai, uye munyu.
Nhanho 6 - Wedzera tembiricha yemukamuri chokoreti musanganiswa muzai musanganiswa, wedzera vanilla, uye whisk kusvika zvanyatsobatanidzwa.
Nhanho 7 - Fukidza muupfu uye whisk kusvikira zvangosanganiswa. Ichave gobvu uye gooey.
Nhanho 8 - Govanisa batter zvakaenzana pakati pemakenduru akazora. Iyi kamukira inogadzira maawa gumi nematanhatu emabhatter, saka anenge maawa mana pamakondohwe.
mutsauko pakati pekeke jena neyero
Pro-Zano: Unogona kumisa batter yako mukati chaimo memakungu ekugadzira kuti ubike gare gare. Ingozvidzora pachitonho chemukati kweinenge awa uye bika senguva dzose! Kana ivo vachiri kutonhora vangangoda imwe yekuwedzera mineti saka vatarise zvakanyanya.
Nhanho 9 - Bika makeke edota kwemaminitsi gumi kusvika gumi nemasere, uchitarisa kuti uone kana mativi emakeke ako apera, asi middles achiri akanyorovera. Iwe unofanirwa kugona kuudza nekutarisa kwairi, asi munyoro wiggle yegondobwe rinokuratidza kana iyo yepakati ichiri kuserera. Unogona kuona mumufananidzo pazasi kuti mativi anozvitutumadza asi nzvimbo yacho ichiri nerima uye mvura.
Kana iwe uri kushandisa yakakura ramekin, iwe uchafanirwa kubika iwo mabhegi echingwa kwemaminetsi 1-2 kwenguva refu.
Nhanho 10 - Bvisa makeke edota kubva muchoto uye rega iwo atonhorere kwemaminetsi 1-2. Sunungura mativi ekeke nebanga kana zvichidikanwa, uye wozoshandura chiganda chikandire mundiro. Iyo ramekini ichave inopisa zvakanyanya saka ndokumbira upfeke inodzivirira mitt apo iwe unononoka kusimudza kubva kuganda.
Nhanho 11 - Gadzira sezvaunoda. Ini ndinonyatsonakirwa neimwe flakey munyu kuyera iyo inotapira. Kirimu yakasungwa, shuga yeupfu, kana ayizi kirimu ingangove yekurumbidza kwakanaka zvakare, pamwe nemabriji erudzi chero rupi zvaro. Iwo makeke akafanirwa kudyiwa nekukasira, asi kana akasiiwa kuti atonhorere, anogona kudzikiswazve ne microwave kwemasekondi angangosvika makumi matatu uye anowana zvakare yavo 'yakanyungudutswa yepakati'.
ndingatengepi mazai emafuro
Makeke asina kubikwa anogona kuomeswa nechando kana firiji kana ukasarudza kuabheka pane imwe nguva inotevera. Iva nechokwadi chekuchera batter yechando usati wabika. Kana makeke ari kutonhora kupinda muchoto vanogona kutora maminetsi mashoma kuti vabike.
UNOGONA SEI KUSVIRA KABHUKU KAVAVA PAN
Paunotora makeke muchoto, rega vagare kweinenge 1 miniti usati wavabuditsa. Wobva washandisa mituni yeovheni kukurumidza kuisa ramekini rakatarisa pasi pamusoro peplate, uye nekunyatso simudza ramekini kumusoro. Iwe unogona zvakare kuisa ndiro yakatenderedzwa pasi pamusoro pegondohwe uye flip iyo yakazara ndiro uye ramekin rakatarisa pasi. Nekuwedzera kuchengetedzeka, mhanyisa banga kumucheto kweye ramekin kuburitsa chero chinhu chingangodaro chakanamatira.
CHII CHANDINOGONA KUSHANDISA PAMUSORO PEMA RAMEKINS?
MaRamekins akanakisa kushandisa nekuti ari nyore kuzora mafuta uye kubvisa ega. Kana iwe usingakwanise kuwana chero zvakadaro, unogona kushandisa muffin tin panzvimbo. Uine gumi nemaviri-muffin tin, girisa mukati memukati matanhatu, dururira iyo batter mukati, uye ubike. Ingo ziva kuti unenge uchiburitsa makeke matanhatu emarara kamwechete, saka zvinogona kunetsa kuvaburitsa. Kana iwe ukashandisa muffin tini, bheka pa 425 ° F (218 ° C) kwemaminetsi gumi nemasere.
UNOGONA KUDZORA KEKE YEMAHARA?
Zvakanakisisa kushandira makeke ebota kunze kwechoto. Nekudaro, kana iwe ukasiya yako lava keke kunze uye inotanga kutonhorera, microwave iyo kwemasekondi makumi matatu uye ichazowana nzvimbo yakanyungudutswa. Yum!
Rufu NeKeke Chokoreti
Mini Cheesecake Mwoyo
Inotsemuka Chokoreti Mwoyo
Chokoreti Yakafukidzwa Strawberries
Mwoyo Kupisa Chokoreti Mabhomba
Chena Velvet Buttermilk Keke
Iyi yakaumbwa chokoreti rava keke iri keke kunze, iine risingadzivisike, ooey-gooey yakanyungudutswa chokoreti nzvimbo. Iwe unongoda zvishandiso zvishoma uye dhizeti ino yeanoda chokoreti inouya pamwe chete mumaminitsi makumi maviri nemashanu. Hapana musanganisi anodikanwa! Gadzirira Nguva:gumi neshanu mins Nguva Yakabika:10 mins Nguva Yese:25 mins Makorori:341kcal
▢6 ounces (170 g) chokoreti yakasviba, kunyanya 70% 1 mukombe
▢3 ounces (85 g) unsalted ruomba 6 Tapepoons
▢3 ounces (85 g) shuga yakawanda 1/2 mukombe
▢piri yakakura mazai (akazara) tembiricha yekamuri
▢piri yakakura mazai emazai tembiricha yekamuri
▢1 ounce (28 g) hupfu hwechinangwa-chose 1/4 mukombe
▢piri Tapira unsalted ruomba zvekuzora
▢sasa yakasviba munyu (sarudzo) yekukwirisa
▢1 teaspoon hupfu hwehuga (sarudzo) yekukwirisa
▢4 zvedongo makemikari (6 oz)
Preheat oven kusvika 425ºF (218ºC) uye uunze mazai ako kutembiricha yemukati. Ini ndinoisa mazai angu mundiro yemvura inodziya kwemaminitsi mashanu.
Gadzirira machira ako eceramic nekukwiza zvidzitiro nemativi nebhotoro. Iyi yekubheka yakaringana ina, 6oz makanda echikanda kana maviri, 8oz - 10oz machira.
Kana iwe uri kushandisa chokoreti machipisi svetuka iyi nhanho. Chop bar yako chokoreti muzvidimbu zvidiki, izvi zvinoita kuti zvive nyore kunyungudika.
Gadzira bain-marie nekuunza 2 masendimita emvura kune simmer muhari. Deredza kupisa kusvika pasi uye wedzera girazi ndiro pamusoro. Ita shuwa kuti mbiya haisi kubata mvura. Wedzera chokoreti yako yakatemwa uye bota, fambisa kusvikira yangonyungudika, wozobvisa kubva pamoto. Isai musanganiswa padivi kuti utonhorere kusvikira kwati dziyei kana tembiricha yemukati, asi kwete kupisa. Kana iwe unogona kusungunusa bhotela yako uye chokoreti mu microwave mu15-yechipiri zvikamu, zvichikurudzira pakati peumwe neumwe kusvikira bota uye chokoreti zvakatsetseka.
Muhomwe huru, tsvina pamwe chete shuga, mazai, mazai evha, uye munyu.
Wedzera mukamuri tembiricha tembiricha musanganiswa muzai musanganiswa, wedzera vanilla, uye whisk kusvika zvanyatso kubatanidzwa.
Fwanya muupfu uye sanganisa kusvikira wangosanganiswa. Ichave gobvu uye gooey.
Gurai batter zvakaenzana pakati pemakanda akaomeswa. Iyi kamukira inogadzira maawa gumi nematanhatu emabhatter, saka anenge maawa mana pamakondohwe.
Bika kwemaminitsi gumi kusvika gumi nerimwe, uchitarisa kuti uone kana mativi emakeke ako apera, asi middles achiri akanyorovera. Iwe unofanirwa kugona kuudza nekutarisa kwairi, asi munyoro wiggle yegondobwe rinokuratidza kana iyo yepakati ichiri kuserera. Kana iwe ukashandisa 8oz kana 10oz makanda ematehwe, bika kwemaminetsi gumi nemaviri kusvika gumi nematatu.
Bvisa kubva muchoto uye mira kwemaminetsi 1-2, sunungura mativi ekeke nebanga kana zvichidikanwa, wozoisa mundiro. Iyo ramekini ichave inopisa zvakanyanya saka ndokumbira upfeke inodzivirira mitt apo iwe unononoka kusimudza kubva kuganda.
Gadzira sezvaunoda. Ini ndinonyatsonakirwa neimwe flakey munyu kuyera iyo inotapira. Yakarohwa kirimu kana ayizi kirimu ingave yekurumbidza kwakanaka futi, pamwe nemabriji erudzi chero rupi zvaro. Iwo makeke akafanirwa kudyiwa nekukasira, asi kana akasiiwa kuti atonhorere, anogona kudzikiswazve ne microwave kwemasekondi makumi matatu uye anowana zvakare yavo 'yakanyungudutswa yepakati'. Makeke asina kubikwa anogona kuomeswa nechando kana firiji kana ukasarudza kuabheka pane imwe nguva inotevera. Iva nechokwadi chekuchera batter yechando usati wabika. Kana makeke ari kutonhora kupinda muchoto vanogona kutora maminetsi mashoma kuti vabike. Iwe unogona zvakare kuchengeta akatobikwa-marasha makeke nekuputira yega yega mupurasitiki yekumonera uye firiji kusvika kumazuva matatu. Ingori microwave 30 masekondi kuti udziye usati washumira!
Iva nechokwadi chekuunza mazai ako kutsivhenekeri. Paunowedzera chokoreti inodziya uye bota mumazai anotonhorera, zvinogona kukonzera kuti ruomba ruome mumachunks uye nekuparadza batter yako. Kune mazai muhombodo, ndinoaisa mumudziyo wemvura inodziya kwemaminitsi mashanu kusvika gumi.
Makeke asina kubikwa emarara anogona kuomeswa nechando uye kubikwa gare gare. Dzorera pakushambidzika kwemukati kweawa imwe wozobika senguva dzose.
Kushumira:1kushumira|Makorori:341kcal(17%)|Carbohydrate:28g(9%)|Mapuroteni:pirig(4%)|Mafuta:25g(38%)|Mafuta Akaguta:gumi neshanug(75%)|Trans Mafuta:1g|Cholesterol:153mg(51%)|Sodium:153mg(6%)|Potassium:25mg(1%)|Fiber:1g(4%)|Shuga:22g(24%)|Vhitamini A:829IU(17%)|Calcium:19mg(piri%)|Iron:1mg(6%)
unogona kuisa buttercream mufiriji
Duncan hines tsvuku velvet keke zvigadzirwa
rava keke ingori isina kubikwa keke
maitiro ekugadzira maruva emakeke